၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြီတွင် သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း စတင်နိုင်မည်ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဆို - Yangon Media Group
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြီတွင် သီလဝါဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ပို့ ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်က ပြောသည်။
မေ ၂၄ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမသက်တမ်းကာလမှ ဒုတိယသက်တမ်း ၃၁.၃.၂ဝ၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ရယူထားသော ပြည်ပချေး ငွေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်းသို့ထည့်သွင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ သီလဝါဆိပ်ကမ်းတွင် လုပ်ကွက်ပေါင်း ၃၇ ကွက်ရှိပြီး ယင်းလုပ်ကွက်များထဲမှငါးကွက်ဖြစ် သော မီတာ ၁ဝဝဝ သီလဝါဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ဂျပန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ယန်း ၂၃ ဘီလီယံဖြင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန့်စင်မောင်က ”စီမံကိန်းပြီးရမှာက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြီးစီး မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုလုပ်ထားတာတွေသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြီးစီးမှာဖြစ် ပြီးတော့ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြီမှာ သီလဝါဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းကို စတင်ကျင့်သုံးကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ယန်း ၂၃ ဘီလီယံကုန်ကျမည့်စီမံကိန်း ချေးငွေဖြစ်သော်လည်း ယန်း ၁၉ ဘီလီယံနှင့်လောက်အောင်သုံးစွဲ မည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ ယန်း ၄ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံခန့်ပိုမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ပ ချေးငွေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝဘက်စုံ စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း၊ တွံတေးတူး မြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းများကိုလည်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း ကို ဂျပန်ယန်း ၂၄ ဒသမ ၈၆၆ ဘီလီယံဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေဖြင့်တွဲဆိုင်း ၁၁ ဆိုင်းတွဲ ပေါင်း ၆၆ တွဲဝယ်ခြင်း၊ မြို့ပတ်ရထားလမ်းအချက်ပြစနစ်များကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ပ ချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများကို သတ်မှတ်စီမံကိန်း ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင်ကြိုး စားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ထပ်လောင်းပြောသည်။
ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် ရေယာဉ်တွဲနှင့် တွဲဟောင်းများ ကမ်းထိုး ရပ်နားထားမှုကို ဖယ်ရှာ
ဂွါဒီယိုလာကြောင့် စတာလင်း၏ခြေစွမ်းပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ဟု တိုရေးချီးကျူး၊ စပါးနှင့်ပွဲအတွက် ?
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ နေရာခုနစ်ခု၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွား၊ အနည်းဆုံး လူ ၁၈၉ ဦးသေဆုံး၊ ၄?
အ​ကောင်​​သေး​ပေမယ့် အဆိပ်​ပြင်းတဲ့​ အေဂျက်